Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, i-CR kaSnort ekugcineni yakhishwa 3 | Kusuka kuLinux
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sabelane lapha kubhulogi izindaba zokukhishwa kwenguqulo ye-beta yeSnort 3 y bekuyizinsuku ezimbalwa ezedlule lapho bekuvele kunenguqulo ye-RC kuleli gatsha elisha lesicelo.
Kusukela ICisco imemezele ukwakhiwa kwalowo ozongenela ukhetho lokwethulwa uhlelo lokuvikela ukuhlaselwa Snor 3 (eyaziwa nangokuthi iphrojekthi ye-Snort ++), ebisebenza futhi ivaliwe kusukela ngo-2005. Uhlobo oluzinzile luhlelelwe ukukhishwa kungakapheli nenyanga.
USnort 3 uphinde wacabanga kabusha ngomqondo womkhiqizo futhi waklama kabusha ukwakhiwa. Phakathi kwezindawo ezisemqoka zentuthuko ye-Snort 3: ukwenza lula ukumiswa nokwethulwa kwe-Snort, ukwenza ngokuzenzakalela ukumiswa, ukwenza lula ulimi lokudala imithetho, ukuthola ngokuzenzakalela zonke izivumelwano, ukuhlinzeka ngegobolondo lokulawulwa komugqa womyalo, ukusetshenziswa iyasebenza
USnort une-database yokuhlaselwa evuselelwa njalo nge-inthanethi. Abasebenzisi bangakha amasiginesha ngokuya ngezimpawu zokuhlaselwa kwenethiwekhi okusha bese bekuhambisa ohlwini lwamakheli lwe-Snort's signature, le ndlela yokuziphatha yomphakathi nokwabelana yenze iSnort yaba enye ye-IDS edume kakhulu, esesikhathini futhi ethandwa kakhulu kunethiwekhi. Imicu eqinile enemicu eminingi ngokufinyelela okwabiwe kwezilawuli ezahlukahlukene ekumisweni okukodwa.
Yiluphi ushintsho oluku-CR?
Kwenziwe ushintsho kusistimu yokumisa entsha, enikeza i-syntax eyenziwe lula futhi ivumela ukusetshenziswa kwemibhalo ukukhiqiza ukulungiselelwa okunamandla. I-LuaJIT isetshenziselwa ukucubungula amafayela wokumisa. Ama-plugins asuselwa ku-LuaJIT anezinketho ezingeziwe zemithetho nohlelo lokubhalisa.
Injini yenziwe yaba yesimanje ukuthola ukuhlaselwa, imithetho ivuselelwe, kuye kwanezelwa amandla okubopha ama-buffers emithethweni (okunamathelayo). Injini yokusesha ye-Hyperscan isetshenzisiwe, okwenze ukuthi kusheshe futhi kunembile ukusebenzisa amaphethini aqalayo ngokususelwa ezinkulumweni ezijwayelekile emithethweni.
Kungeziwe imodi entsha yokuzazisa ye-HTTP okuchazwa ngeseshini futhi okubandakanya ama-99% ezimo ezisekelwa i-suite yokuhlola ye-HTTP Evader. Kungezwe uhlelo lokuhlola lwethrafikhi ye-HTTP / 2.
Ukusebenza kwemodi yokuhlola iphakethe ejulile kuthuthukisiwe ngokuphawulekayo. Kungezwe amandla wokucutshungulwa kwamaphakethe anemicu eminingi, okuvumela ukwenziwa ngasikhathi sinye kwemicu eminingi eneziphathi zamaphakethe nokuhlinzeka ngokulingana okulinganayo okususelwa kwinani lama-CPU cores.
Isitoreji esivamile sokumiswa namatafula wemfanelo kusetshenzisiwe, okwabelwana ngakho kumasistimu ahlukene, okwenze ukuthi kube nokwenzeka ukunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwememori ngokususa ukuphindaphindwa kolwazi.
Uhlelo olusha lomcimbi olusebenzisa ifomethi ye-JSON futhi luhlangana kalula namapulatifomu angaphandle anjenge-Elastic Stack.
Ukushintshela ekwakhiweni kwezakhiwo, ikhono lokwelula ukusebenza ngokuxhumeka kwe-plug-in kanye nokuqalisa kwezinhlelo ezingukhiye ezinkulu ngendlela yama-plug-ins angashintshwa. Okwamanje, ama-plugins angamakhulu amaningana asevele esetshenziselwe iSnort 3, ehlanganisa izindawo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza, ngokwesibonelo ukuvumela ukuthi ungeze ama-codec akho, izindlela zokuzihlola, izindlela zokubhalisa, izenzo nezinketho emithethweni.
Ukutholwa okuzenzakalelayo kwezinsizakalo ezisebenzayo, kuqeda isidingo sokucacisa ngesandla amachweba wenethiwekhi asebenzayo.
Kungezwe ukusekelwa kwefayela ukukhipha ngokushesha izilungiselelo ezihlobene nezilungiselelo ezizenzakalelayo. Ukusetshenziswa kwe-snort_config.lua ne-SNORT_LUA_PATH kuyekiwe ukwenza lula ukumiswa. Kungezwe ukusekelwa kokulayisha kabusha izilungiselelo endizeni;
Ikhodi inikeza amandla okusebenzisa ukwakhiwa kwe-C ++ okuchazwe kuzinga le-C ++ 14 (Umhlangano udinga umhlanganisi osekela i-C ++ 14).
Isilawuli esisha se-VXLAN sesingeziwe.
Ukusesha okuthuthukisiwe kwezinhlobo zokuqukethwe ngokuqukethwe kusetshenziswa okunye ukwenziwa okubuyekeziwe kwe-Boyer-Moore ne-Hyperscan algorithms.
Ukwethulwa okusheshayo ngokusebenzisa imicu eminingi ukuhlanganisa amaqembu emithetho;
Kungezwe indlela entsha yokubhalisa.
Uhlelo lokuhlola i-RNA (Real-time Network Awareness) lungeziwe, oluqoqa imininingwane ngezinsizakusebenza, abaphathi, izinhlelo kanye nezinsizakalo ezitholakala kwinethiwekhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, i-CR ye-Snort 3 ekugcineni yakhishwa.
Septhemba 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala